I-Peixin yathatha inxaxheba kwi-ANDTEX 2019 e Bangkok, Thailand | I-PEIXIN
I-AndTEX i-2019 ngumsitho apho ii-nonwovens kunye nabavelisi beemveliso zokwenza injineli, abaphandi, abasebenzisi kunye neenkokheli zecandelo ezivela kwihlabathi liphela bahlangana ukuze bahlole ubutyebi bamathuba amatsha eshishini lokufumana i-nonwovens kunye neemveliso zokulahla ezilahlayo eMzantsi-mpuma Asia.
Umzantsi-mpuma Asia kukho amazwe ali-11 aquka iThailand, iIndonesia neMalaysia, enabantu abazizigidi ezingama-640. Bangaphezu kwezigidi ezili-10 iintsana ezizelwe ngonyaka ngamnye, inani labasetyhini lifikelela kwizigidi ezingama-300, kwaye ukwaluphala / abantu abakhulileyo zizigidi ezingama-40.
Umthamo wemveliso ye-nonwovens yangoku ayonelanga ukwanelisa iimfuno zabathengi kwingingqi, ngakumbi iimveliso ezingenziwanga zaza zangeniswa eThailand okanye eMzantsi-mpuma Asia.
Ngexesha elifanelekileyo, ngenxa yetekhnoloji yethu ephezulu, ekumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yokuthengisa emva kwexesha, Oomatshini bePINIXIN babetsale abathengi abaninzi kwimarike yonke. Emva kokuzazisa kwethu umsebenzi womatshini, umhlalutyi wemveliso kunye nenkqubo yetekhnoloji, abathengi abaninzi bancoma oomatshini, ngakumbi umatshini wethu wokucheba iidapter kunye nomatshini we underdad. Senze konke okusemandleni ethu ukuze siphendule yonke imibuzo ngokucacileyo nangononophelo. Bonke abathengi banelisekile yinkonzo yethu.
Sityala imali ngakumbi nangakumbi kuphando nakuphuhliso kunye nokumilisela iinkqubo eziphambili zolawulo kuba sihlala sifuna ukuqhubeka kwinqanaba elinye. Kwaye ndinethemba lokuhamba ngekamva eliqaqambileyo kubo bonke abathengi bethu.
panty wesampula Production Line , Wet esisula Machine , uTsalo Up Machine , Mini Pad Production Line , Lady Pad Machine , Daily Ucoceko Machine ,